नेपाल आइडल सिजन २ मा आफ्नो कला देखाउने हैन ? हेर्नुस कहाँ कहिले हुदैछ अडिसन — Motivate News
नेपाल आइडल सिजन २ मा आफ्नो कला देखाउने हैन ? हेर्नुस कहाँ कहिले हुदैछ अडिसन
काठमाडौँ – बहु चर्चित अन्तरास्ट्रिय फ्रेन्चाईज टेलिभिजन रियालिटी शो नेपाल आईडलको दोस्रो सिजनको अडिसनको लागि मिति तय भएको छ ।
देशक विभिन्न ६ शहरमा अडिसन हुने भएको हो। अडिसनमा छनौट भएकाहरुले मुख्य प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छन्। कार्यक्रम एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने छ ।
हेर्नुस कुन शहरमा कहिले र कहाँ हुदैछ अडिसन।
भैरहवा ः चैत्र ६ गते जेसिस किन्डरगारटेन हाई स्कुलमा,
धनगढी ः चैत्र ११ गते सुदुर पश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा,
हेटौडा ः बैशाख ३ गते सिद्दार्थ माविमा,
धरान ः चैत्र ८ गते बिष्णु मेमोरियल उच्च माविमा,
पोखरा ः बैशाख १४ गते श्री जनप्रिय माविमा,
काठमाडौँमा हुने अडिसन मिति भने छिट्टै तोकिने एपी वानले जनाएको छ ।
नेपाल आइडल दोस्रो सिजनलाई पनि ओप्पोले नै प्रयोजन गरेको छ । पहिलो सिजन बुद्द लामाले जितेका थिए भने निशान भट्टराई पहिलो रनरअप र प्रताप दास दोस्रो रनरअप भएका थिए ।